Madaxweyne Xasan oo ku farxsan safiirka Mareykanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo ku farxsan safiirka Mareykanka
Mudisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa helay hubaal ah in Madaxweyne Obama uu magacaabi doono Safiirkii Mareykanka ee ugu horreeyey ee uu y soo magacaabo Soomaaliya muddo labaatameeyo sano ah, sidaas waxaa lagu yiri war-saxaafadeed kazoo baxay Villa Somalia.
“Waxa aan ku faraxsanahay in aan hubaal kadhigo ujeedooyinkeenna wadaagga ah ee Nabadgalyada, horumarin loo dhan yahay iyo Dowlad-wanaagga ee Soomaaliya. Soo Magacaabidda Safiir cusub oo Mareykan ah waxa ay tusineysaa sida uu u xoog badan yahay is-aaminidda iyo wada-shaqeynta ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Mareykanka” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud.
“Waxa aan joognaa billowga safarkeenna aan ugu soconno dhinaca nabadda iyo barwaaqada ee Soomaaliya. Waxa aan guddoonsanahay jidka dheer ee naga horreeya, laakiin jidkaas waxa fududeynaya waxa aan ognahay in ay saaxiibadeen nala jiraan annaga oo isku-ujeeddo ah,” ayuu yiri mudane Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynuhu waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaaliyana ay mar dhow magacaabi doonto Safiirkeeda Mareykanka.
“Annaga oo kaashaneyna taageerada socota ee saaxiibadeenna caalamiga ah, waxaa hubaal ah go’aankeenna aan kala go’a laheyn ee ku raadineynno ujeedooyinkeenna Dowlad-dhisid sida ku cad Higsiga 2016. Dowladda Federaalka Soomaaliyeed waxa ay ballan ku qaadday meel-marinta Dastuur-Federaal oo Afti loo qaaday sanadka 2016., iyada oo dhidibada u aaseysa nidaam Federaal ah islamarkaana xaqiijineysa HAl QOf, HAl COD ee doorashooyinka sanadka 2016” ayuu sidoo kale yiri Xasan Sheekh.
“Si loo gaaro ujeeddooyinkaas, waxaa waajib nagu ah in aan dhisno matoorradii umaddeenna: Baarlamaankeenna, si uu u horumariyo una mariyo shuruuc wax ku-ool ah oo si buuxda u taageeraya Xukuumad shaqeyneysa. Waa in aan horumarinnaa hey’adaheenna iyo dadkeenna oo maamuli kara. Waa in aan hagaajinno awoodeenna aan ku dhalineynno kuna maamuleynno kheyraadka maaliyadeed iyada oo dhammaan lagu dhisayo is-faham oo lan dhan yahay oo ku saleysan habka Dowlad-wanaagga”
“Waxa aan soo dhaweyneynaa taagerada socota ee Mareykanka annaga oo rajeyneyno sii xoojinta xiriirkeenna dibloomaasiyadeed iyada oo loo marayo magacaabidda labada safiir ee labada dhinac” Ayuu Madaxweynuhu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa.
Dowladda Mareykanka waxay sanado badan taageereysey baadi-goobka loogu jiro xasillooni iyo taabba-ggal dimuqraadiyadeed oo ka islaaxda Soomaaliya, wuxuuna Mareykanku la shaqeeyay ciidanka Soomaaliyeed.
Mareykanka ayaa sidoo kale taageerayey AMISOM, isagoo siiyay tababar, qalabeyn iyo taageero saad ilaa iyo sanadkii 2007.
Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa dhawan ku dhaawaqay in madaxweyne Obama uu magacaabayo safiirka dalkaasi u fadhinaya Soomaaliya.
Somali Independent Workers’ Unions Submit Joint Complaint Against the Somali Embassy in Geneva
Axmed Madoobe: Amisom ha furto xafiis gargaar